शिव शर्मा पौडेल नेतृत्वलाई नैे पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको अधिवेशनमा भोट किन ? — SuchanaKendra.Com
शिव शर्मा पौडेल नेतृत्वलाई नैे पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको अधिवेशनमा भोट किन ?
आउँदो २०७७ चैत ७ गते हुने पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको अधिवेशनमा लोकतन्त्र पक्षधर व्यवसायीहरुका तर्फबाट हामीले उम्मेदवारी दिने जानकारी गराउन चाहन्छौं । विधि, पद्धति, पारदर्शिता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा उद्यमी व्यवसायीको हकहितका लागि हाम्रो उम्मेदवारी हुनेछ । अध्यक्षमा शिव शर्मा पौडेलको नेतृत्व उद्यमी व्यवसायीका लागि आफैंमा भरोसायोग्य नेतृत्व हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । पदाधिकारी र सदस्यहरुको यस्तो टिम तयार गरेका छौं कि जहाँ अनुभवले खारिएका, नेतृत्व कुशलताले भरिएका साथीहरु रहनुभएको छ ।
हाम्रो नेतृत्व र टिम भरोसायोग्य हो भन्ने पर्वतका उद्यमी व्यवसायीमात्रै नभई जिल्लाभरकै बासिन्दाका सामू छर्लंग छ भन्ने हामीले ठानेका छौं । किनभने यसअघि हामीले विभिन्न भूमिकामा रहेका गरेका कार्यहरु र दिएका योगदान खुला किताबका खुला पाना झैं छन् । हामीले आफ्नै उद्यम व्यवसायलाई समय सापेक्ष ढंगले विकास र विस्तार गरेको कुरा होस् या पर्वतका सामाजिक, आर्थिक, विकासका क्षेत्रमा गरेको योगदान, सायद लुकेको केही छैन । सबै पारदर्शी छ । जिल्लामा मुलुककै अग्ला र लामा झोलुंगे पुल निर्माणमा खटिएर गरेको काम अर्काे उदाहरण हो । सुन्तला र लप्सी प्रवद्र्धनका लागि गरिएको महोत्सव त्यस्तै उदाहरण हो । कुश्मा बजारमा अटो रिक्सा सञ्चालन र व्यवस्थापनको समन्वय र सहजीकरण पनि उदाहरणीय नमूना हो । यस्ता थुप्रै बग्रेल्ती उदाहरण हामीसँग छन्, जुन सर्वविदित छन भन्ने लाग्छ ।
पर्वत उद्योग वाणिज्य संघ केवल उद्यमी व्यवसायीको हकहितमा मात्रै सीमित हुने गरेको छैन, समग्रमा यसले सिंगो पर्वत जिल्लाकै व्यावसायिक उत्थान र विकास निर्माणमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । हो, त्यसैले उद्यम व्यवसायसँगै सामाजिक क्षेत्रमा समेत योगदान गरी जिल्लालाई नै सुन्दर भविष्य दिन सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । त्यो आवश्यकता शर्मा नेतृत्वमा हाम्रो टिमका उम्मेदवार निर्वाचित हुँदा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं ।
अथाह सम्भावना बोकेको पर्वत जिल्लाको जीवनस्तर उकास्न, सबैभन्दा पहिला यहाँको व्यावसायिक स्तर उकासिनुपर्छ । यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र प्रवद्र्धन हुनुपर्छ । कृषि उपजको उत्पादन आधुनिक र यान्त्रीकरण विधिबाट हुनुपर्छ । साथसाथै उत्पादनको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण हुनुपर्छ । यी तमाम कामका लागि अगुवाइ गर्ने, पहल कदमी लिने जिम्मेवारी पर्वत उद्योग वाणिज्य संघ र त्यसको नेतृत्वले गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । हामी यी लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न उद्यम व्यवसायमैत्री वातावरण हुनुपर्छ भन्ने ठान्छौं । त्यसका लागि पनि झक्झक्याउने र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पहल संघले गर्नुपर्छ भन्छौं । हामी नेतृत्वमा पुग्दा गर्ने पनि छौं ।
उद्यम व्यवसायको विकास र विस्तार बिना समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन । त्यसका लागि आजको युगले मागेको प्रविधिलाई हामीले पछ्याउनै पर्छ, उद्यमी व्यवसायीको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ । त्यसैका लागि सबैभन्दा पहिला उद्योग वाणिज्य संघमा सबल र सक्षम नेतृत्व चाहिएको छ । जुन हामीले दिनेछौं । संघलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र उद्यमी व्यवसायीलाई आधुनिक युग र समय सापेक्ष ढंगले सबल तथा सक्षम बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । वास्तवमा यी उद्देश्य हाम्रा मात्रै उद्देश्य होइनन्, पर्वतका सबै उद्यमी व्यवसायीका उद्देश्य हुन् । तिनलाई पूरा गर्न पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा पुगेपछि हामीले गर्ने महत्वपूर्ण कार्यबारे प्रतिबद्धताहरु जाहेर गर्दछौँ ।
हाम्रा प्रतिबद्धताहरु :::
– पर्वत उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्ध व्यवसायीहरुको रु. १० लाखको निशुल्क दुर्घट्ना बिमा गरिने छ ।
शिव शर्मा पौडेलको संक्षिप्त वैयक्तिक विवरण :
२०४५ – पिएन क्याम्पस पोखरामा नेविसंघको धौलागिरी समन्वय समितिका संयोजक ।
२०४८ – जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङको परिवार नियोजन सहायक ।
२०५२ – सदरमुकाम कुश्मा बजारमा शीतल डेरी स्थापना गरेर व्यवसाय सुरु ।
२०५२ – उद्योग वाणिज्य संघ पर्वतमा सदस्यता ।
२०५५ – पर्वत डेरी एसोसियसनका संस्थापक अध्यक्ष ।
२०६० – उद्योग वाणिज्य संघ पर्वतमा कार्य समिति सदस्य ।
२०६० – कुश्मा–ज्ञादी जोड्ने नेपालकै अग्लो र लामो झोलुंगे पुल निर्माण समितिका अध्यक्ष, हाल संरक्षण समितिका अध्यक्ष
२०६८ – पर्वत पर्यटन प्रबद्र्धन केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष
२०६९ – नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ पर्वतका अध्यक्ष
२०६९ – नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आजीवन सदस्य
२०६९ – रोटरी क्लब अफ पर्वतका अध्यक्ष
२०७१ – पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको उद्योग उपाध्यक्ष
२०७५ – उद्योग वाणिज्य संघ पर्वतको कार्य समिति सदस्य
२०७६ – कुश्मा नगरपालिका पर्यटन समिति सदस्य